विवादमा 'द सुपर मम' प्रतियोगिता- आयोजकले पैसा लिएर विजयी बनाएको प्रतिस्पर्धीको आरोप- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
हामीले सोच्यौं एउटा, रिजल्ट अर्कै : निर्णायक भुवन चन्द
पैसा खर्च गरेकी छैन : विजेता एमी कर्माचार्य
जेष्ठ ९, २०७६ रामजी ज्ञवाली
काठमाडौँ — बेला–बेलामा विभिन्न अभिव्यक्ती दिएर विवादमा तानिँदै आएकी अभिनेत्री पूजना प्रधान (स्त्री)लाई अहिले सुन्दरी प्रतियोगीताको ताज बेचेको आरोप लागेको छ । 'द सुपर मम' प्रतियोगीतामा रकम लिएर थाइल्याण्डमा बस्दै आएकी एमी कर्माचार्यलाई विजयी बनाएको भन्दै अधिकांस सहभागी प्रतिस्पर्धीहरुले विरोध जनाएका छन् ।
केहि वर्षयता चलचित्र क्षेत्रमा खासै सत्रिय नभएकी अभिनेत्री प्रधानले २९ बैशाखमा काठमाडौंको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा ‘द सुपर मम’ नामक सुन्दरी प्रतियोगीता आयोजना गरेकी थिइन् । पुजनाको आफ्नै केट इन्टरटेनमेन्टले आयोजना गरेको उक्त प्रतियोगीतामा आमा बनिसकेका महिलाको उल्लेख्य सहभागीता थियो ।
आयोजकले धाँधलीपूर्ण र पक्षपाती ढंगले निर्णय गरेको तथा आर्थिक चलखेल गरेर कर्माचार्यलाई विजेता बनाएको भन्दै प्रतियोगीतामा सहभागी महिलाहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेरै पुजनाले पैसा कमाउनका लागि प्रतियोगीता आयोजना गरेको र पैसा लिएर विजेता बनाएको दाबी गरेका छन् ।
प्रतियोगितामा ‘फस्ट रनरअप’को ताज पाएर पनि ताज फिर्ताको घोषणा गरेकी अमृता शर्माले प्रतियोगिता धाँधलीपूर्ण र पक्षपाती भएको बताइन् । उनले पुजनाले मनोमानी ढगंले महिलालाई ‘प्रोडक्ट’को रुपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाइन् । ‘उनले आमाहरु माथि ज्यादती गरिन्,’ उनले भनिन्, ‘आमाहरुलाई सडकमा ल्याएर नचाइन् र विनर बनेकी महिलासँग पहिला नै पैसा लिएर सेटिङ गरेकी थिइन् ।’ उनले सहभागीता जनाएवापत समेत डेढ लाखको हाराहारीमा खर्च गराएर त्यसवापतको कमिशन लिएको दाबी गरिन् ।
यो प्रतियोगीतामा १६ जना प्रतिष्पर्धी सहभागी थिए । उनिहरुमध्ये नौजनाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तीमा आयोजक प्रधान र उनकी आमाले प्रतियोगितालाई सुनियोजित, प्रायोजित र षड्यन्त्रमूलक ढंगले संचालन गरेको दाबी गरिएको छ ।
असक्षम प्रतियोगीलाई ताज जिताउन दुवैबीच आर्थिक लेनदेन भएको दाबी गर्दै प्रतिस्पर्धीले पुजना र एमी कर्माचार्यको पतिबीच व्हाट्सएपमा भएको कुराकानीको स्क्रिनसटलाई प्रमाणका रुपमा पेश गरेका छन् । यस्तै लेनदेनबारे व्हाट्सएपमा भएको कुराकानीको स्क्रिनको भिडियो पनि स्रोतले उपलब्ध गराएको छ । उक्त भिडियोका देखिएको कुराकानीलाई आदार मान्ने हो भने कुनै विषयमा लेनदेन भएको हुनसक्ने देखिन्छ ।
विरोध गरिरहेका महिलाहरुले थाईल्याण्डमा बस्दै आएकी एमी कर्माचार्यको ताज फिर्ता गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । प्रतियोगीमध्येकी एमी कर्माचार्यलाई प्रथम बनाउन र बाला राईलाई तेस्रो बनाउनका लागि सोधिने प्रश्नपत्र समेत आउट गरिएको उनीहरूको आरोप छ ।
उनिहरुले प्रति व्यक्ति १ लाख ५० हजारका दरले आफूहरूको खर्च भएको रकम आयोजक र पुजना प्रधानले फिर्ता गर्नुपर्नेसमेत माग राखेका छन् । केहि दिनअघि रिपोटर्स क्लबमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा समेत प्रशिक्षक करुणा रिजाल, प्रतियोगीहरू निलम श्रेष्ठ, सुष्मा कार्की, गीता दाहाल, लक्ष्मी श्रेष्ठ, शुभेच्छा रिमाल, विमला तिमल्सिना (नेवार), अमृता शर्मा, ईशारा थपलिया र कमला थपलिया लगायत सहभागी थिए भने उनिहरु अधिकांसको माग र आरोप एउटै किसिमको थियो ।
यस विषयमा पुजना प्रधानले गलत सोच राखेर कसैलाई विजेता नबनाएको दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘कार्यक्रम कोर्डिनेटर करुणा रिजालले आफुले भनेजस्तो किसिमको रिजल्ट नआएपछि महिलाहरुलाई विरोधमा उतार्नुभएको हो । यसमा कुनै सत्यता छैन ।’
आफ्नो कार्यक्रममा ५० हजार कसैले स्पोन्सर गरेको पैसालाई नकारात्मक ढंगले पैसा खाएको आरोप लगाएको पुजनाको तर्क छ । ‘यदि मैले पैसा नै खाने हो भने ५–६ लाख नै खान्थे नि,’ उनले भनिन्, ‘मैले कसैलाई जिताउँछु भनेर जिताएको हैन । हामिले कतिपयको ताज खोस्ने योजनामा थियौं, त्यहि मौकामा उनिहरुले सुरुमै ताज फिर्ता गरेका हुन् ।’
यस प्रतियोगीताको निर्णायकको भुमिकामा बिशाल पहाडी, सन्ध्या पहाडी, भुवन चन्द, बाबा सरकार श्रेष्ठ, रागीनी उपाध्याय, भुषण श्रेष्ठ लगायत थिए ।
पुजना एउटा कलाकार भएको नाताले उहाँले गर्नुभएको कार्यक्रममा निर्णायकको भुमिकामा बोलाउनुभयो । म ऊक्त कार्यत्रममा गएँ । तर कार्यक्रम निकै भद्रगोल जस्तो थियो । हामी ६ जना निर्णायक थियौं । हामीले सुपर मम हुनुपर्नेमा के–के गुणहरु हुन्छन्, त्यसअनुसार अंक दिएका थियौं । तर त्यो भन्दा फरक किसिमको रिजल्ट आयो ।
त्यो रिजल्ट आउँदा हामीहरु अचम्मित भयौं । मैले तुरुन्तै ‘तिमीहरु छुट्टै जज् पनि बसेका छौ कि क्या हो ?’ समेत भनेकी थिएँ । कार्यक्रम निकै हतार हतारमा गरिएको थियो । उता प्रतियोगीहरुले प्रस्तुती देखाइरहेका बेला हामिलाई कागजमा साइन गर्न ल्याइएको थियो, उता हेर्ने कि साइन गर्ने ? तर जसो जसो भनें, त्यसै गर्‍यौं । खास के भएको हो त्यो भगवानले जानुन् ।
ब्युटी प्याजेन्ट त्यसैअनुसार हामिले निर्णय गरेका थियौं । हामीले निलम श्रेष्ठ नम्बर वान हुने गरी अंक दिएका थियौं । प्रतियोगीहरु सबै राम्रो हुनुहुन्थ्यो, त्यसमध्ये निलमलाई हामीले धेरै मन पराएका थियौं र उहाँको प्रस्तुती पनि त्यसअनुसार थियो । हामीले सोचेको भन्दा फरक किसिमको रिजल्ट आउँदा निकै खल्लो अनुभव भयो ।
पैसा खर्च गरेकी छैनँ : विजेता एमी कर्माचार्य
जहाँपनि यस्ता खालका प्रतियोगीता विवादमुक्त हुन सकेका छैनन् । सुपर मम जितेपछि हार्नेहरुले विवाद झिक्नुभएको हो । ३ हप्तासम्म ट्रेनिङ हुँदा कति खुसीसाथ काम गरेका थियौं । म विनर भएपछि धेरैको खुसी भताभुङ्ग भए ।
खासमा यो प्रतियोगीतामा ५–६ जनाले चित्त नबुझाउनुभएको हो । मेरो घरमा ३ वर्षदेखि उथलपुथल भैरहेको छ । छोरी गुमाएको २ महिनापछि मेरो पनि लिभर, हड्डी र ब्रेस्टमा क्यान्सर देखियो । उपचारका लागि धेरै खर्च भयो । मैले एक वर्ष भारत बसेर राजिव गान्धी अस्पतालमा उपचार गराएँ, अझै उपचार भैरहेको छ ।
पैसा धेरै भएर मैले नेपाल आएर ताज किनेको होइन । म सँग एउटा क्राउनका लागि पैसा खर्च गर्ने मेरो क्षमता पनि छैन ।
प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ १२:५६
जेष्ठ ९, २०७६ आश गुरुङ
लमजुङ — कहिलेकाहीं पुसमाघमा समेत मनाङमा हिउँ पर्दैन । यसपटक अचम्मै भयो, बैशाख–जेठमा पनि हिउँ पर्‍यो । अलिअलिमात्रै नभई गाउँबस्ती नै ढाकिने गरी । तराईमा ४० डिग्री सेन्टिग्रेडमाथि तापक्रम पुगेको छ ।
हिमाली जिल्ला मनाङको नारमा भने हिमपात भइरहेको छ । गर्मीले तराईमा एकसरो लुगा लगाउन समेत मुस्किल परेका बेला मनाङको नारमा भने मुटु कमाउने जाडो बढेको छ ।
‘४/५ वर्षअघि बैशाखमा हिउँ परेको थियो । त्यतिबेला अलिअलि परेको थियो । यो त हिउँ पर्ने समय होइन,’ नारगाउँका फुर्पा ठेले लामाले भने, ‘पुसमाघमा हिउँ पर्दैन बरु । पछिल्लो समय त बैशाख जेठमै हिउँ पर्ने पो भयो ।’
नार्पाभूमि गाउँपालिका–१ का अध्यक्ष रितार छिपेल लामाले जेठमै हिउँ पर्नु नयाँ कुरा भएको बताए । नार्पाभूमि गाउँपालिका अध्यक्ष मिङमा छिरिङ लामाले जेठ १ गतेयता प्रायः दिनदिनै हिमपात भइरहेको बताए । ‘सुरुमा हावाहुरी चल्छ । त्यसपछि पानी पर्छ । पानी पर्दापर्दै हिमपात हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘जेठमै ३ इन्चसम्म हिउँ जम्ने गरेको छ ।’
उनले मंगलबार र बुधबारसमेत गाउँमा केही समय हिमपात भएको बताए । अहिलेको संकेत अनुसार जेठ महिनाभरी नै हिमपात हुनसक्ने उनले अनुमान गरे । ‘माघ फागुनको हिमपातले धेरै नोक्सान पुर्‍यायो । बैशाख जेठमा पनि हिउँ परेको छ । असार नलागेसम्म यस्तै होला जस्तो छ,’ उनले भने, ‘मौसम परिवर्तन भइरहेको छ । बेमौसमको हिमपातले बिउबालीलाई समस्या पारेको छ ।’
फागुनभरी हिमपात हुँदा स्थानीयमात्रै नभएर अस्थायी रुपमा मनाङ बस्दै आएकाहरु आत्तिएका थिए । एकदिन हिउँ पर्न छोडे उनीहरु सहरबजार झर्थे । अहिले मनाङकै नार गाउँका बासिन्दा जेठ महिनामा समेत हिमपातसँग जुधिरहेका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति मनाङका उद्योग अधिकृत प्रदीप न्यौपानेले बर्खा लाग्ने बेलामा पनि हिमपातको अचम्मको दृश्य देखिएको बताए । ‘नारमा हाम्रो तालिम चल्दै थियो । हामी गयौं । गएकै दिन हिमपात भयो,’ उनले भने, ‘कस्तो अचम्म । हामीलाई पुसमाघ जस्तै लाग्यो ।’
नासों गाउँपालिका–१, तालगाउँकी कान्छी गुरुङ नारबासीलाई अचार बनाउने तालिम दिन गएकी थिइन् । ‘हाम्रो गाउँमा पुसमाघ मै हिउँ देख्न मुस्किल छ । २० वर्षपछि अहिले फागुनमा हिउँ पर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘नार गाउँमा जेठमै पनि हिउँ पर्दो रहेछ ।’ मनाङका जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जनार्दन अधिकारीले नारगाउँमा हिमपात हुँदा अचम्म मानेको बताए । ‘हिमाली जिल्ला चिसो त स्वभाविक हो । बैशाख–जेठमै हिमपात हुनु त त्यति स्वभाविक ठानिन मैले ।’
‘पहिले त मान्छे नै उडाउने गरी हावा चल्यो । पछि त हिमपात भैगो,’ अधिकृत न्यौपानेले भने । जिल्ला निर्वाचन अधिकारीले नारबाट काङला पास हुँदै मनाङ गाउँ निस्कने योजना भएपनि हिमपातले जान नसकिएको बताए ।
नारमा नार गेष्ट हाउससमेत संचालन गर्दै आएका लामाले मौसम परिवर्तन भइरहँदा अहिले हिमपात भएको हुनसक्ने अनुमान गरे । उनका अनुसार पुसमाघको हिमपातले बालीनाली सप्रिने भएपनि बेमौसममा परेको हिमपातले बालीनाली बिगार्छ । उनका अनुसार आलु र करु रोपेको २ साता पनि भएको छैन । एकसातापछि तोरी रोप्ने तयारी छ । ‘आलु र करु उम्रिएको छ । ‘पानी परेको भए खेती राम्रो हुने थियो । हिउँ पर्‍यो । साह्रै चिसो छ । चिसोले बाली पहेंलो बनाइदिन्छ । पहेंलो भएपछि मर्ने सम्भावना हुन्छ ।’
संघीय संरचनापछि नार्पाभूमि गाउँपालिकाको १, २ र ३ नं. वडामा नार गाउँ पर्छ । ४ हजार १ सय २० मिटर उचाईको नार गाउँमा ८६ घरधुरी छन् । स्थानीयको प्रमुख बाली आलु, जौ, करु र तोरी हो । तिनै बालीमा हिमपातले क्षति पुर्‍याएको वडाअध्यक्ष लामाले बताए ।
तस्बिर र भिडियो सौजन्यः प्रदीप न्यौपाने/मनाङ
प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ ११:४४
कंगनाको कटाक्ष : स्टारकिड सुन्दर देखिनु करणको गल्ती होइन